Shina · Mey, 2017 · Global Voices teny Malagasy
Shina · Mey, 2017
Tantara mikasika ny Shina tamin'ny Mey, 2017
Fanabeazana 31 Mey 2017
Fitantanam-pitondrana 27 Mey 2017
Fanabeazana 21 Mey 2017
Fahalalahàna miteny 21 Mey 2017
Azo eritreretina ho tsy nahita antony mitombina ry zareo, ka izany no antony tsy nakàny ny telefaona finday teny aminay [...]. Nivory nandritry ny ora roa ry zareo, ary avy eo dia nanoratsoratra fanontaniana. Nila naka ny hevitry ny amboniny ry zareo vao tonga tamin'io. Nambarako azy ireo fa tsy hanao afa-tsy ny hiteraka fahafaham-baràka ho azy ireo izao rehetra izao.
Mediam-bahoaka 17 Mey 2017
Fanatanjahantena 13 Mey 2017
Nihen-danja ho fampisehoana be loatra sy fahaizamanao kely loatra ve ny haiady Shinoa? Mieritreritra toy izay ny olona iray mpanao Haiady Mifangaro, ary narahany asa ny teniny.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 10 Mey 2017
Mediam-bahoaka 04 Mey 2017